अनेमकी सोडारीको अडियो सुनेपछि बालुवाटारमा खैलाबैला | Citizen Post News
अनेमकी सोडारीको अडियो सुनेपछि बालुवाटारमा खैलाबैला
२०७६ असार २४ गते ११:५१
अनेमकी सोडारीको अडियो सुनेपछि बालुवाटारमा खैलाबैला काठमाडौं । पश्चिमतिर चलेको भाषा रहेछ ‘जोई पोई’ । साधारण व्यक्तिले मात्र होइन, नेता कार्यकर्ताले पनि यो भाषाको अचाक्ली प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो एउटा अडियोमा नेकपा आवद्ध स्थानिय नेतृको भाषाले पुष्टि गर्छ । जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुनिसकेका छन् ।
अखिल नेपाल महिला (अनेम) संघ कैलालीकी अध्यक्ष गीता दिर्घ सोडारीले अश्लिल गाली गरेको अडियोमा पीडित महिलाले उनको ‘पोई’ भन्छिन् भने पीडक गीताले ‘जोई’ । त्यो अडियोमा यति मात्र छैन । त्यसैका कारण सुदूर–पश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारी बर्खास्तमा परेका थिए । अझ यो अडियो भीम रावले सुनेपछि उनको नेकपाको साधारण सदस्यता पनि खारेज भयो । अडियोमा के छ ? गीताले मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका पति दिर्घसँग सम्बन्ध स्थापित गरेकी एक महिलालाई भन्नु नभन्नु भनेकी छन् ।
अश्लिल गाली मात्र गरेकी छैनन् । उनलाई ‘केपी ओली, प्रचण्ड जसकामा जानुपर्छ जा तँलाई मार्छु’ भनेकी छन् । यस्तै, अनेम संघकी स्थानिय नेता गीताले र..डी भन्ने शव्द त कति भनेकी छन् । प्राप्त तीन वटा अडियोमा ५० पटक भन्दा बढी पीडितलाई र..डी भनेकी छन् । सोही कारण ति पीडित महिला कैलाली पुग्न सकेकी छैनन् । उनले, आफूलाई आएको धम्कीसहितको अडियो र उजुरी अनेम संघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीको नीजि सचिवालय बालुवाटारमा बुझाएकी छन् ।
पीडितलाई गीताले भनेकी छन्,‘तँ कहाँ लुकेर बसेकी छन् । ताकत भए धनगडी आइज र..डी । तेरी छोरीलाई पनि र..डी बनाउनू, छोरासँग सुत्नु ।’ गीता यतिमा रोकिएकी छैनन् । उनलाई पीडित महिलाले ‘म तेरो पोइसँग होइन, तेरो पोई मसँग आएको हो । यसो भनें भने’ भन्दा गीता अझ आक्रोशित भएर भन्छिन्,‘तेरो पोई नामर्द छ, अर्काकी पोइसँग सल्केकी ।’ गीताकै कारण ति महिलाको विचल्ली भएको छ । उनले न्यायका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग शरण समेत मागेकी थिइन् ।
सोही अडियोलगायतका अपशव्दसहितका कतिपय प्रमाण प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि प्राप्त गरेको भोलीपल्टै मन्त्री पदबाट दिर्घ सोडारीलाई मुक्त गरिएको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सदस्य समेत रहेकी गीता यसअघि पनि अनेक विवादमा मुछिएकी छन् । जिल्लामा केही गुन्डालाई प्रयोग गरी मनपरी काम गरेको अभियोग पहिला पनि लागेको थियो । अडियोमा गीताले धम्क्याउँदै ‘म गीता सोडारी हुँ, कसले कारबाही गर्न सक्छ । जहाँ जानु छ जानु’ सम्म भनेकी छन् । गीता, तत्कालिन एमाले कार्यकर्तालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएकी थिइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ शिवनगरस्थित सोडारीको निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको घर निर्माणमा प्रयोग गरिएको सामाग्री नालिमा राखेका कारण वस्ती नै डुवानमा परेको विषयमा छलफल चरिरहेका बेला गीता सोडारीले स्थानीय कार्यकर्ता चक्र बोगटीका काका नाता पर्ने ६५ वर्षिय लक्ष्मण बोगटीलाई ज्यानमार्ने धम्की दिएका कारण विवादमा तानिएकी थिइन् । गीताको यो अडियो र अन्य कर्तुतका कारण बालुवाटारमा खैलाबैला मच्चिएको छ । उनलाई कारबाही गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब परेको छ । दिर्घलाई मात्र कारबाही गरेर नपुग्ने भन्दै बालुवाटारबाट प्रदेश इञ्चार्ज भिम रावललाई पनि गीतामाथि कारबाही गर्नका लागि दबाब परेको छ ।